ITIL Vs I-PMP Certification? Yintoni efanelekileyo kuwe? - ITS Tech School
I-ITIL Vs yePP Certification
Zombini i-PMP Certification (Professional Management Professional) kunye ne-ITIL Certiification (iThala leNkcukacha zeTeknoloji yeeNkcukacha zoLwazi) zikhethiweyo. Isiqinisekiso ngasinye siyakwazi ukuhlawula umsebenzi ophezulu kunye nomvuzo ophezulu.
Kuthe siqale ngeenzuzo zoqinisekiso lwe-PMP. Xa uqala ukunyusa uqeqesho oluya kwisitulo, kuthatha ubuninzi obuqinileyo kunye nesiqinisekiso.
Yiba nokuba kunjalo, ukuphuma ngekhosi echanekileyo kunokunceda umntu aqhubele phambili ngokukhawuleza, unokucinga oku xa isatifikethi se-PMP sibe yinto ebalulekileyo kwaye yenza izinto zibe nzima kunoko naziphi na iingcinga. A cert kwi-PMP kuphucula iziphathamandla zakho zolawulo lweeprojekthi kwaye kukuchaphazela ukuba ube nenani elikhulu lamandla angcono ngokubhekiselele ekulawuleni amancinci kunye nokunyamekela iiprojekthi. Phanda ezinye izinto ezintle zokuzifumana uzixhobile nge-certified PMP.
Ukukhula okungaqhubekiyo kwimisebenzi yakho
Ikhosi ye-certification ye-PMP ngumsebenzi owamkelekileyo jikelele kwaye ubonwa yiqela labantu behlabathi lonke. Kwisigaba se-IT, ezininzi izindlu zenkampani zijonge iindwendwe eziqinisekisiweyo ze-PMP kwaye oku kunokuphucula ngokwenene ubukhulu bomsebenzi ophezulu kunokuba ubonwe ngaphambili.
Umntu ngamnye kwihlabathi elibambiseneyo ngokungenakuqinisekileyo uyazi ukuba luncedo lwezixhobo zolawulo kunye nendlela ephucula ngayo inzuzo ekusebenzeni. Xa uvula i-PMP iqinisekisa ubungcali, unomdla wokudibanisa nabantu abaye benza ikhosi kunye nalabo bavunyelwe ngokuvunyelwa kwe-PMP. Ngokuqinisekileyo oku kuphuculwa kweentengiso kunye neentengiso zisebenza njengengcali ngelixa likunika ithuba lokuba uthathe udonga oluphezulu ngaphezu kokukhethwa kwamathuba omsebenzi.
Ukuphuculwa kwinqanaba leZakhono
Akunjalo njengento elula njengoko kuzwakala ukuthabatha ubuchule kunye nokufana nawe kufuneka ulungiselele ngokucokisekileyo. Kwakhona kukho itoni yomsebenzi ehambelana nemigangatho yomsebenzi wekhosi. Ufumana ithuba lokulungiswa kwaye ukongezwa ngokubanzi kwi-multi-pronged ulawulo lweprokjekthi sikhokelo. Ukwahlukana kwale nkqubo kubandakanya
Ngenxa yoko, ufumana ithuba lokuthabatha inqanaba elilandelayo leekhokhelo zolawulo lweprojekthi ezingenakuninzi lwezandla ezikhoyo kwiiprojekthi zakho zentlangano yansuku zonke yokuphunyezwa okuphuculweyo kunye nokuphunyezwa kweprojekthi.
Uya kuba nekhono lokujolisa kwiinkampani eziphezulu kwinqanaba elibanzi lehlabathi elisebenza malunga namacandelo ahlukeneyo, oku kungenxa yeso sivumelwano kuya kuphucula umgangatho wakho wobugcisa kwaye uqiniseke ukuhlangana kweprojekthi yakho yokuphatha. Ngokufanayo uza kudibanisa nabantu abakuyo iqela lezo zifundo, unako ukuzidla kwiintetho, kunye nemibutho ebancedisayo ulwazi malunga nobuchule bakho.
Umgangatho wokufumana iNgeniso engcono
Kucacile ukuba, kuthethwa ukuba isatifikethi se-PMP siya kukunika ithuba lokuba ngumlawuli weprojekti ophezulu kunabantu abangaqinisekanga. Xa ufumana inqanaba, uya kuqala ukubona ukunyuka nokuhlawula ngaphezulu.
Izakhono zoLawulo lweProjekthi yeZiko loNyaka
Oku kunikwa rhoqo xa ufika uboshwe kunye ne-PMP. Umlawuli weprojekti ufuna ukulawula imilinganiselo eninzi yezinto kunye nenani elincinci lokujongana neengxube ezihlukeneyo kwiprojekthi kunye nokuhlukana kwe-certification ye-PMP iyalwelwa ukuba kukho ukuphucula okuvelisayo kwiikhono lomphathi weprojekthi.
Masiqonde nje ukuba ngeendlela eziphuhlisayo zedatha, ibhishini ngalinye kulindeleke ukuba lijongane nophuhliso lwentengiso. Kuye kwenziwa ubunzima obuhlukahlukeneyo ngokubhekiselele kuLawulo lwe-IT yobuchule. Ukujongana nobunzima obunjalo, iinqununu zokulawulwa kweelayibrari ze-ITIL okanye ze-IT ziye zaqala ukuthatha isikhundla esaziwayo kwishishini. I-certified ye-ITIL ihlukaniswe phakathi kwesiseko se-ITIL, ITIL ephakathi kunye namanqanaba eengcali ze-ITIL.
Amanqaku anomdla we-certification ayinzuzo. Kwimeko apho intloko inikwe ulwazi lwe-ITIL, ngokuqinisekileyo uya kubandakanyeka kwinhlangano kuba ekwazi ukulinganisa ngokufanelekileyo ukusebenza kwenkonzo kwaye ngokuqhubekayo ukulungelelanisa ukuphathwa kwedatha ngeendlela ezingenakuqondakala into enye. Isatifikethi siza kuphucula umgca wokugxila komntu ngokubhekiselele ekubeni yingcali, umlawuli okanye ngabacebisi be-IT.
Kwimeko apho ixhotyiswe isiqinisekiso, ubonakalisa ngokwenene umgangatho wezabasebenzi ngokubhekiselele kumqhubi ngamnye ukuhlala phambi kwamanye kwiCandelo le-IT. Oku kukuchaphazela ukufumana izinto ezincomekayo. Xa kugqityiwe isitifiketi se-ITIL, abalawuli banomkhuba wokufundiswa, uqeqesho kunye nokusebenza kakuhle ngokubhekiselele ekuhambeleni kwindlela yokuziphatha esekelwe kwi-IT ekhethekileyo. Nge-certification ye-ITIL, uqala ukuthetha ulwimi oluqhelekileyo kwezo zakhono zengcali zonke kwaye ke ngoko, uqala ukungena kwiwebhu yeenkqubo ezingaphezulu kunye nokuxhaswa okunye ukufikelela kwi-IT.
Abalawuli abanikezwe isatifikethi se-IT kunye nolwazi baya kuhamba phambili ekugqibeleni baphumelele ngokubaluleka kwintlangano nganye kuba bekwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo yonke idatha yokusebenza kuyo. Ukwenza okunjalo, ngelixa ubenokukwazi ukujonga ixesha lokuphendula kunye neenkcukacha ngaphakathi kwintlangano kunye nabathengi, uncedo lwabasebenzi be-ITIL cert spun. Ukuze ube neengqiqo, kufuneka ucacise ukuba isitifiketi se-ITIL sisisetyenzana esingenanto esicacileyo sokuvula ngaphandle kwe-PMP. Iyokugqibela inokudandatheka kwindlela ekuthatha ngayo ilungiselelo elikhulu lomsebenzi okhutheleyo kunye nokulungiselela ngokugqibeleleyo ekupheleni kwakho.
Kwimeko nayiphi na into, ngokuqinisekileyo, isatifikethi sokukhetha sizathu sokwakha kwaye siya kuxhomekeka ngokubhekiselele ekukhanyeni kweyona nto ulungele ngayo umsebenzi wakho we-IT. Oku kuya kuxhomekeke ekubeni umntu ngamnye uyahlula iithagethi kwaye athumele iinjongo.
Unokuhlola kwakhona: -I-ITIL yeSatifikethi seMisebenzi yeMisebenzi
Kufuneka ucinge kwaye ufumanise ukuba ngokufanelekileyo imele ngayiphi na enye inokukunceda ukuba ukwanelise iinjongo zomsebenzi kunye nophuhliso ngokuphindaphindiweyo. I-Ocarreer ithuba lokufumana ithuba lokuba ufuna ukubonisa ulwazi kwiprojekti efanele yeprojekti onokuyenza ngaphandle kokulula okuya kwi-PMP.
Kwimeko nayiphi na imeko, xa usalindela iingcamango ezichaseneyo malunga noLawulo lweNkonzo lwe-IT, unokuya ku-ITIL, kunokuba ube ngu-PMP. Izatifikethi zombini azikwazi ukuba nekhanda ukulungelelaniswa kwentloko kuba zinenjongo ezithile kunye nekhosi ehlukeneyo. Kuxhomekeke kuwe njengomqeqeshi we-IT kwaye njengomntu, ukuhlala kwisigqibo esifundisiweyo.
Indlela efanelekileyo kakhulu yokufumana iSiqinisekiso se-PMP kwi-2018 - Notes Notes, Tips and PMP® Update Update